Arsenal oo farta loogu fiiqay xiddig Fantastik ah - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Arsenal oo farta loogu fiiqay xiddig Fantastik ah
Arsenal oo farta loogu fiiqay xiddig Fantastik ah
Mesut Ozil ayaa la filayaa inuu ka tago Arsenal xagaaga soo socda isagoo dhawan uu ka masaafuriyay kooxda tababaraha Gunners Mikel Arteta.
Arsenal ayaa loogu baaqay inay lasoo wareegto Houssem Aouar si ay badal uga dhigto Mesut Ozil xagaaga soo aadan.
Gunners ayaa isha ku haysay abuuraha Lyon daaqadii dhaweyd laakiin way ku fashilantay in ay heshiis la gaarto.
Kooxda reer France ayaa 55 milyan oo ginni ku dooneysay Aouar waxayna iska diiday dalab loo maleynayay inuu ku dhow yahay 35 milyan oo ginni oo ka yimid Gunners.
Maalintii ugu dambeysay, Arsenal waxay doorteen inay bixiyan qimaha lagu burburin karay qandaraaska Thomas Partey oo ahaa £ 45m si loogu abaalmariyo ciyaaryahanka reer Ghana masuuliyada khadka dhexe ee Gunners.
Laakiin weli waxaa jira baahi loo qabo hal-abuurnimo weyn oo khadka dhexe ah waxaana xiisaha dheer ee ay Arsenal u qabto xiddiga reer France Aouar ay muujineysaa inay ku laaban karaan 22 jirkaan sannadka 2021.
Isla daaqadaas ayaa laga arki doonaa Arsenal oo u ogolaaneysa Ozil inuu si bilaash ah kaga tago marka uu dhaco qandaraaskiisa £ 350,000-toddobaadkii uu ku qaato.
Kubadsameeyaha ku guuleystay Koobka Adduunka bixitaankiisa Emirates ayaa xitaa imaan karta ka hor waqtigaas iyadoo Arsenal ay dooneyso inay gaabiso heshiiskiisa isla markaana ay macsalaameyso bisha Janaayo.
Ciyaaryahanka reer Jarmal ayaan u ciyaarin kooxda tan iyo bishii Maarso laakiin mushaharkiisa ugu qaalisan kooxda tan iyo markii loo dhiibay qandaraaskiisa lacagta badan bishii Janaayo 2018 ayaa walaac ku ah kooxda.
Mikel Arteta ayaa isha ku haya inuu ka tago Ozil inkastoo uu si cad u sheegay inuu diyaar u yahay inuu siiyo fursad labaad, iyadoo 31 jirkaan laga saaray 25ka ciyaaryahan ee kooxda u mataleysa wareega group-yada Europa League.
Halyeeyga Newcastle iyo Tottenham Ginola ayaa aaminsan in Aouar uu noqon doono bedelka saxda ah ee Ozil oo baxaya sanadka soo socda.
“Waxaan u maleynayaa sidaas. In lagu badalo Aouar waxay noqon laheyd doorasho cajiib ah,” Ginola ayaa u sheegay Sky Sports News.
“Xaqiiqdii isagu waa nooca ciyaartoy ee ay jamaahiirta Arsenal jeclaan lahaayeen inay ka daawadaan kooxdooda.
“Haddii uu doonayo inuu sii joogo Lyon, taasi waa dareenkiisa, weli waa ciyaaryahan da’ yar ah.
Inaan bedelo Ozil, waxaan qabaa inuu yahay dookha ugu fiican ee Arsenal. ”
dhanka kale khabiirka kubada cagta yurub Julien Laurens ayaa aaminsan in Arsenal ay lasoo saxiixatay xiddig khadka dhexe ah kaasoo ah mid tayo ahaan gabi ahaanba qaarada yurub aan nociisa laga helin.
Previous articleCabsi badan oo soo wajahday Ciyaaryahan Harry Kane
Next articleTababaraha Liverpool oo qaadanaya goolhaye hore